Lisitra feno momba ny lesoka noho ny kolikoly MS Access Database
Home Products DataNumen Access Repair Lisitry ny hadisoana feno
Lisitra feno momba ny lesoka noho ny kolikoly Microsoft Access Database
Rehefa mampiasa Microsoft Access ianao hanokatra tahiry fidirana simba, dia hahita hafatra diso isan-karazany, izay mety somary mampisafotofoto anao ihany. Noho izany, eto izahay dia hiezaka ny hanao lisitra ny lesoka rehetra mety, voalahatra arakaraka ny fahita matetika. Isaky ny lesoka tsirairay dia hilazalaza ny soritr'aretina ananany izahay, hanazava ny antony marim-pototra ary hanome rakitra ohatra ary koa ny rakitra namboarin'ilay fitaovana fanarenana Access anay DataNumen Access Repair, mba hahafantaranao tsara azy ireo. Eto ambany dia hampiasa ny 'filename.mdb' izahay hanehoana ny anaran'ny fisie MDB Access.
4.90 / 5 (avy amin'ny vato 1,502)
Format Database tsy fantatra 'filename.mdb' (Error 3343)
Mila amboarina ny tahiry 'filename.mdb' na tsy rakitra rakitra. (Error 2239) Mety hiala amin'ny Microsoft Office Access tampoka ianao na mpampiasa hafa raha misokatra ny angon-drakitra Microsoft Office Access. Tianao ve ny Microsoft Office Access hanandrana manamboatra ny tahiry?
Tsy nahita ilay zavatra 'xxxx' ilay motera database an'ny Jet Jet. Hamarino tsara fa misy ilay zavatra ary tsipelinao tsara ny anarany sy ny anaran'ny lalana. (Hadisoana 3011)
Tsy azo vakiana ny firaketana; tsy misy alalana vakiana amin'ny 'xxxx' (Error 3112)
Tsy afaka manokatra tahiry 'filename.mdb'. Mety tsy tahirin-kevitra eken'ny fampiharana anao, na mety simba ny fisie. (Hadisoana 3049)
Tsy manana alalana ilaina hampiasa ilay zavatra 'filename.mdb' ianao. Avelao ny mpandrindra ny rafitrao na ny olona namorona ilay zavatra hametraka fahazoan-dàlana mety aminao. (Hadisoana 3033)
Karazan-tahiry an-tsaha tsy mety (Error 3259)
Hadisoana tsy nampoizina 35012
Ny fanovana nangatahinao teo amin'ny latabatra dia tsy nahomby satria hamorona soatoavina duplicate ao amin'ny index, lakile voalohany na fifandraisana. (Hadisoana 3022)
Hitan'ny Microsoft Access fa tsy mitohy io tahiry io ary hanandrana hamerina ny tahiry. Mandritra io fizotran-javatra io dia hatao kopia backup amin'ny tahiry ary ny zavatra sitrana rehetra dia hapetraka ao anaty tahiry vaovao. Ny access dia hanokatra ny tahiry vaovao. Ny anaran'ireo zavatra tsy tratra soa aman-tsara dia hosoratana ao amin'ny latabatra "Error Error". (Error 9505)
Microsoft Access mangataka tenimiafina rehefa manokatra angon-drakitra maloto.
Tsy azo sokafana ny tahiry satria tsy azo vakiana ilay tetikasa VBA ao anatiny. Tsy azo sokafana raha tsy efa voafafa voalohany ny tetikasa VBA. Ny famafana ny tetikasa VBA dia manaisotra ny kaody rehetra amin'ny modules, form ary tatitra. Tokony averina alefa ny tahiry angona alohan'ny hanandramana manokatra tahiry ary hamafa ny tetikasa VBA. (Hadisoana 29081)
'Id' dia tsy index amin'ity tabilao ity. na 'AOIndex' dia tsy index amin'ity tabilao ity. (Error 3800)
Tsy tsoratadidy manan-kery. (Hadisoana 3159)
Hadisoana natokana (- ####); tsy misy hafatra momba an'io hadisoana io. (Hadisoana 2626/3000)
Mety tsy ho voaro ity rakitra ity raha toa ka misy kaody izay nokasaina hanimba ny solosainanao.
Ho fanovozan-kevitrao dia manangona ny lisitr'ireo lesoka fidirana amin'ny kinova Access hafa izahay:
Lisitra feno momba ny lesoka 2003
Lisitra feno momba ny lesoka 2007
Lisitra feno momba ny lesoka 2010
Lisitra feno momba ny lesoka 2013
Lisitra feno momba ny lesoka 2016